कामवासना र व्यक्तित्व : स्वीकारोक्तिदेखि ढाकछोपसम्म- विचार - कान्तिपुर समाचार
कामवासना र व्यक्तित्व : स्वीकारोक्तिदेखि ढाकछोपसम्म
पश्चिमा संसारमा सिग्मन्ड फ्रायडको प्रादुर्भाव भएसँगै व्यक्तित्वको अध्ययनमा यौन मनोविज्ञानले प्रश्रय पायो र त्यसयता इतिहासका महत्त्वपूर्ण मानिने मानिसको यौनजीवनका माध्यमबाट उनीहरूको व्यक्तित्वलाई हेर्ने कोसिस थालियो । फ्रायड स्वयं पनि यो अध्ययन पद्धतिको अपवाद बन्न सकेनन् ।
असार १४, २०७८ शंकर तिवारी
सन् १७८९ । इस्वी संवत्‌को यो साल भन्नेबित्तिकै विश्वइतिहासमा जानकारी राख्ने जोकोहीलाई फ्रेन्च क्रान्तिको याद आउनु स्वाभाविक हो । फ्रेन्च क्रान्तिको महिमा र महत्ता यस्तो छ कि, यसको अध्ययन–अनुसन्धानबिना दुनियाँको कुनै पनि क्रान्तिको अध्ययन अधुरो–अपुरो हुन जान्छ ।
सन् १७८९ मा एटलान्टिक महासागरवरिपरि के–के घटना भएका थिए भन्नेबारे बाह्र विद्वान्ले हालै गरेको एक अध्ययनलाई ‘१७८९ : ट्वेल्भ अथर्स एक्सप्लोर अ एअर अफ रिबेल्यन, रिभोलुसन एन्ड चेन्ज’ (२०२०) शीर्षकमा मार्क आरोन्सन र सुसान क्याम्पबेल बर्टोलेट्टीले सम्पादन गरेर छापेका छन् । यस पुस्तकमा मार्क आरोन्सनले थोमस जेफर्सनकी दास प्रेमिका शेली हेम्मिङ्सको प्रसंग पनि समाहित गरेकी छन् । कारण, १७८९ मा ती दासी आफ्नो भावी जीवनबारे अलमलका बीच कठोर निर्णय गर्दै थिइन् ।
थोमस जेफर्सन संयुक्त राज्य अमेरिकाका तेस्रो राष्ट्रपति थिए । त्यसो त उनले आफ्नो मृत्युपछि स्थापना गरिने इपिटाफ अर्थात् समाधि–लेखमा आफूलाई तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपतिभन्दा पनि ‘अथर अफ द डेक्लारेसन अफ अमेरिकन इन्डेपेन्डेन्स, अफ द स्टाच्युट अफ भर्जिनिया फर रिलिजियस फ्रिडम एन्ड फादर अफ द युनिभर्सिटी अफ भर्जिनिया; यिनै तीन कार्य म बाँचेको दसी–प्रमाण हुन्, जसका लागि मलाई सम्झिइयोस्,’ लेख्नू भनेर इच्छापत्रमा उल्लेख गरेका थिए । जहाँ–जहाँ मानिसहरू स्वतन्त्रताका लागि लडेका छन्, ती सबैले प्रेरणा लिने दुई विख्यात घोषणापत्र ‘द डेक्लारेसन अफ अमेरिकन इन्डेपेन्डेन्स’ (१७७४) र ‘डिक्लारेसन अफ द राइट्स अफ म्यान’ (१७८९) दुवैको लेखनीमा जेफर्सनको विशेष भूमिका थियो । एउटामा मूल लेखकका रूपमा र अर्कोमा सल्लाहकार/परिमार्जनकर्ताका रूपमा । अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्रामलाई फ्रान्सले सघाएको थियो । कारण, फ्रान्स र बेलायत ‘जानी दुस्मन’ थिए । तर, चतुर अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले पेरिस र लन्डन दुवै राजधानीबाट आफ्नो देशको हितमा स्वतन्त्रता संग्रामपछि समेत कार्य गराइरहेका थिए ।
अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको घोषणापत्रका लेखकका रूपमा जेफर्सनको ख्याति युरोपमा फैलिसकेको थियो । विशेष गरी उनले लेखेको वाक्य ‘हामी हरेक मनुष्यलाई विधाताले समान दृष्टिले सृष्टि गरेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई स्वतः सिद्ध प्रमाणित मान्छौं किनभने उनीहरूलाई विधाताले सुम्पेको अहरणीय अधिकारका रूपमा जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजीलाई कसैले पनि निषिद्ध गर्न सक्दैन’ पढ्दा अहिले पनि जोकोही पाठक रोमाञ्चित हुन्छन् । थोमस जेफर्सन सन् १७८५ मा फ्रान्सका लागि अमेरिकी राजदूतका रूपमा पेरिस पुगेका थिए, जति बेला उनी चार सन्तानका पिता भइसकेका थिए । उनको परिवारसँगै शेली हेम्मिङ्स र उनका दाजु जोन बस्थे ।
शेली हेम्मिङ्स चौधवर्षे नवयौवना थिइन् भने थोमस जेफर्सन चौवालीस वर्षका अधबैंसे । जेफर्सनकी पत्नी मार्था असह्य रोगले मृत्युको मुखमा थिइन् । आफ्ना पतिलाई सन्तानसामु राखेर उनले आजीवन बिहे गर्नेछैनन् भनी वाचा गर्न लगाएकी थिइन्, अर्थात् उनका सन्तानहरूले सौतेनी आमाको मातहतमा रहनुपर्ने छैन । जेफर्सन–पत्नी मार्थाले उक्त किरिया गराउँदा उनको परिवारमा दासी भए पनि कामदारको हैसियतमा रहेकी शेली संयोगले त्यस घटनाको प्रत्यक्षदर्शी बन्न पुगेकी थिइन् । फलतः जेफर्सनले आजीवन दोस्रो बिहे गरेनन् र उनी पत्नीको वचनप्रति प्रतिबद्ध भए । के जेफर्सनको जीवनमा शेलीको उपस्थितिबेगर यो सम्भव थियो ?
लामो समय इतिहास जेफर्सनको पक्षबाट लेखिए पनि पुलिट्जर पुरस्कार विजेता प्राध्यापक आनेते गोर्दोन रिडले ‘द हेम्मिङ्सेस अफ मन्टिसेलो : एन अमेरिकन फ्यामिली’ (२००८) पुस्तकमा शेलीका आँखाबाट जेफर्सनलाई हेर्ने कोसिस गरेकी छन् । प्राध्यापक रिडका अनुसार, जेफर्सनको परिवारसँगै पेरिस पुगेकी शेलीलाई पेरिसमै रहने र जेफर्सनको परिवारबाट मुक्त हुने विकल्प पनि थियो, तर किन उनका दाइ र उनले जेफर्सनको परिवारबाट मुक्ति चाहेनन् ? किन उनी पेरिसको स्वतन्त्र जीवन त्यागेर जेफर्सनसँगै उनको गृहनगर मन्टिसेल्लो, अमेरिका प्रस्थान गर्नका लागि राजी भइन् ? शेलीकी आमा मार्थाको बाबुबाट गर्भवती भएका कारण मार्था शेलीकी विमातृ अर्थात् सौतेनी दिदी थिइन् । शेलीका पूर्वज अफ्रिकी/अश्वेत भएकाले जेफर्सनले त्यो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेनन् भन्ने पनि छ । जे होस्, जेफर्सनले उनलाई परिवारमा औपचारिक रूपमा श्रीमतीको स्थान नदिए पनि बाँकी सम्पूर्ण इज्जत र मर्यादा दिए अनि त्यो मान्यता उनीहरूबाट हुन गएका सन्तानहरूको हकमा पनि लागू भयो ।
रिडका अनुसार, जेफर्सन यति उदार थिए कि उनले शेलीलाई कहिल्यै दासीका रूपमा व्यवहार गरेनन् । उनका भाइ जेम्सले भान्से र शेलीले जेफर्सनकी छोरीको कुरुवाका रूपमा फ्रान्समा त्यति बेलाको चल्तीको भन्दा बढी ज्याला पाउँथे । फ्रेन्च क्रान्तिको सफलतालगत्तै फ्रान्समा दास प्रथाको अन्त्य गरिएको थियो । फ्रान्समै बस्न चाहेकी भए शेली दासबाट मुक्त वा स्वतन्त्र मानिसको दर्जामा रहन सक्ने थिइन् । तर, अमेरिका फर्केर जाँदा उनीहरू दुवैको हैसियत दासका रूपमा रहे पनि जेफर्सनको परिवारभित्र उनीहरूको शान–सौकत भने यथास्थान रहने देखेर उनले त्यो विकल्प रोजिन् भन्ने छ । जेफर्सनले प्रेम र सपना देखे भने शेलीले प्रेम र कानुन देखिन् भन्ने रिडको मत छ । यसरी आजभन्दा झन्डै दुई शताब्दीअघि भएको र मानव इतिहासको स्वतन्त्रता संग्रामका दुई सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दस्तावेजसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध व्यक्ति थोमस जेफर्सनको निजी जीवनका घटनालाई इतिहासकारहरूले अहिले पनि उत्खनन गरिरहेका छन् । सार्वजनिक जीवनमा स्वतन्त्रताका पक्षधर भए पनि जेफर्सन निजी जीवनमा कति उदात्त थिए भनेर उनको परख भइरहेको छ ।
नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा हालै लेखक सरिता तिवारीले कार्ल मार्क्सको जीवनको निजी पक्षका केही कुरा ‘कान्तिपुर’ को नियमित स्तम्भमार्फत सार्वजनिक गरिन् । कार्ल मार्क्स र उनकी घरेलु सहयोगीसँगको सम्बन्धबाट सन्तान जन्मेको सत्य–तथ्यका आधारमा र त्यसरी जन्मेको सन्तानलाई मार्क्सले अभिभावकत्व दिन इन्कार गरेको विषयलाई टेकेर सरिताले मार्क्सलाई ‘बलात्कारी’ को आरोप लगाएकी छन् । मार्क्सलाई देउताभन्दा माथि राख्ने नेपाली कम्युनिस्टलाई त्यो कुरा चित्त बुझेन । ‘कम्युनिस्टहरूका देउता’ मार्क्सलाई बलात्कारीको आरोप लाग्नु/लगाइनु कथित शुद्धतावादी मार्क्सवादीहरूलाई पाच्य हुने विषय थिएन । उनीहरूले सरिता तिवारीमाथि विभिन्न शैलीबाट प्रहार गर्ने कोसिस पनि गरे । त्यो लहरको अग्रमोर्चामा आफूलाई ‘वैज्ञानिक समाजवादी’ भन्न रुचाउने अर्का चिन्तक लेखक आहुति पनि ‘कान्तिपुर’ कै नियमित स्तम्भमै सामेल भए ।
आहुतिले त मार्क्सकी सेविकाले ‘इतिहासको महान् सर्वहारा क्रान्तिमा बलिदान दिएको’ भनेर गलत कार्यको महिमामण्डन नै गरे । इतिहासमा जोसुकैले गल्ती गरेको किन नहोस्, त्यो गल्ती गल्ती नै हुन्छ । मार्क्स एउटा मानिस थिए र मानिसका रूपमा उनका पनि सीमितता–कमजोरीहरू थिए । मार्क्सको निधनको धेरै वर्षपछि सार्वजनिक भएको यो तथ्यलाई मार्क्स पैदा भएको समाजले उनको मानवीय कमजोरीलाई सहजतापूर्वक सार्वजनिक बहसको विषय बनायो । नेपाली कम्युनिस्टलाई त्यही विषय एउटा सानो लिखतमा चर्चा गर्दा स्विकार्न मुस्किल भयो र उनीहरूले नाङ्गो बचाउमा उत्रेर आफ्नो बौद्धिक संकीर्णता प्रदर्शन गरे ।
महात्मा गान्धीका अन्यत्रका विरोधीजस्तै केही नेपाली कम्युनिस्ट गान्धीको आलोचना गर्नुपर्‍यो भने उनकी नातिनी–भतिजी मनु बेनसँगको सम्बन्धलाई लिएर आलोचना गर्छन् । गान्धीको मनुसँगको कुनै त्यस्तो अस्वस्थ सम्बन्ध थिएन । उनले आजीवन अनेक विषयको परीक्षण गरिरहे— राजनीति, आहारविहार, औखतीमुलोलगायत यावत् विषयमा । उनको आत्मकथाको शीर्षक नै ‘सत्यको प्रयोग’ त्यही कारण राखिएको हो । मनु गान्धी–पत्नी कस्तूरबा जीवित हुँदै गान्धीको परिवारमा समाहित भएकी थिइन् । कस्तूरबाको मृत्युपश्चात् मनुको आमा बन्ने अभिभारा गान्धीले सम्हाले । आफ्ना निजी सहयोगी प्यारेलाल मनुसँग लहसिएको सुइँको गान्धीले पाएका थिए । चालीस वर्षको उमेरदेखि ब्रह्मचर्यको अभ्यास गरेका गान्धीलाई करिब तीन दशकपछि आफ्नो ब्रह्मचर्यको परीक्षण गर्ने भूत सवार भयो । मनुलाई रुचि नै नभएको अनावश्यक विषयमा गान्धीले विवादमा ल्याए । गान्धीको मनुसँगको सम्बन्ध अरू कसैले सार्वजनिक नगरेर गान्धी स्वयंले गरेका थिए, त्यो पनि घटना भएकै हप्ता । आफूले गरेको परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएको बताउँदै गान्धीले आफूमा अझै हिंसाको अंश रहेको स्विकारे । त्यो गान्धीको इमानदार स्पष्टोक्ति थियो । कसैले लगाएको आरोपको खण्डन उनले गरेका थिएनन् । त्यसबारे गान्धीको जीवनका गाथाकारहरूले कलम चलाएका छन् र स्वयं मनुले लेखेका डायरी र पुस्तक ‘बापु माई मदर (१९४९)’ प्रकाशित छन् । गान्धीसँग नजिकबाट जोडिएका नारीहरूले र नारीहरूबारे गान्धी जीवित हुँदै र मृत्युपश्चात् पनि अनेकन् पुस्तक प्रकाशन गरेका/भएका छन् । यो क्रम रोकिएको छैन । तैपनि गान्धीले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा जति महिलाको अग्रमोर्चामा सहभागिता हुन्थ्यो, त्यति दुनियाँको कुनै आन्दोलनमा नभएको अध्ययनले देखाएका छन् ।
सत्य, अहिंसा, शान्ति र सत्याग्रहका माध्यमबाट गान्धीले विश्वलाई दिएको सन्देशलाई न्यूनीकरण गर्न उनका विरोधीहरू निजी विषयमा टेको लिएर बारम्बार प्रहार गर्न खोज्छन् । गान्धीले यस्तो प्रहारको सामना जीवनकालमै गरेका थिए । तर, त्यो कुराले गान्धीले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्य ओझेलमा परेको छैन । त्यसैगरी कार्ल मार्क्सको व्यक्तित्व उनले गरेको विद्वत् कार्यको जगमा अडिएको छ । ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’, ‘दास क्यापिटल’ लगायतका पुस्तक त्यसका अनुपम उदाहरण हुन् । मार्क्सको कोसँग कस्तो सम्बन्ध थियो भन्ने विषयले उनको बौद्धिक कार्यलाई ओझेल पार्ने सामर्थ्य नराखे पनि उनको सार्वजनिक र निजी जीवनबीचको संगति/असंगतिबारे परिचर्चा निषेध गर्न सकिने र गर्नुपर्ने विषय होइन ।
सन् १८५१ मा मार्क्स–पत्नी जेनी र घरेलु कामदार लेन्चेन डेमुथ ‘निम्स’ बाट केही महिनाको अन्तरालमा सन्तान पैदा भएका थिए । मेरी ग्याब्रिएल लिखित ‘लभ एन्ड क्यापिटल : कार्ल एन्ड जेनी मार्क्स एन्ड द बर्थ अफ अ रिभोलुसन’ (२०११) मा परिवारिक खर्च जोहो गर्न जेनी अन्तै गएका बेला मार्क्स भने लेन्चेनसँग अनुचित कार्यमा लिप्त रहेको उल्लेख छ । १८४८ मा ‘कम्युनिस्ट मेनिफस्टो’ सार्वजनिक गरेर संसारभरिका उत्पीडित सर्वहारा मजदुरको मुक्तिको कामना र आह्वान गरेका मार्क्स आफूबाट पैदा भएको सन्तानको बाप्टैजेसन/नामकरणमा सहभागी भएनन् । यो सबै कार्यको ढाकछोप गर्ने तारतम्य मिलाउन उनका अन्यतम सहयोगी एंगेल्स सरिक भए । जन्मदर्तामा बाबुको नाम खाली राखियो र एंगेल्स नक्कली अभिभावक बने । फ्रेडरिक नाम गरेका ती बालक नारकीय बाल्यकाल बिताउन बाध्य भए । यो कुराको वर्णन बेलायतको लेबर पार्टीका नेता एवं छाया सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका टिरिस्ट्रम हन्टले ‘मार्क्स जेनेरल : द रिभोलुसनरी लाइफ अफ फ्रेडरिक एंगेल्स’ (२००९) मा विस्तारमा लेखेका छन् । मार्क्सको बौद्धिक र सार्वजनिक व्यक्तित्वमा कुनै ह्रास नपुगोस् भनेर एंगेल्सले यस प्रकरणलाई विलुप्त पार्ने सचेत कोसिस गरेका थिए ।
झन्डै चार दशक मार्क्सको परिवारको भरणपोषण गरेका एंगेल्सले त्यो बच्चालाई देखिसहेनन्, उनी अरू सबैप्रति उदार थिए, तर फ्रेडरिकप्रति अनुदार नै रहे । मार्क्स र एंगेल्सको यस्तो कृत्यले उनीहरूमा विद्यमान ढोंगी चरित्रलाई राम्रोसँग उजागर गरेको छ । मार्क्सको कृत्य सार्वजनिक नहोस् भनेर लेन्चेनलाई मार्क्स जीवित रहुन्जेल उनकै सुसारेका रूपमा राख्ने प्रबन्ध एंगेल्सले गरे । मार्क्सको देहान्तपश्चात् एंगेल्सले लेन्चेनलाई आफ्नो गृहस्थीमा जोडे । एंगेल्सको घरमा फ्रेडरिक आफ्नी आमा लेन्चेनलाई भेट्न सहजतापूर्वक पाउँदैनथे । एंगेल्सले यो कुरा आफ्नो मृत्यु हुने बेला आफ्नी अन्तिम सेविका/संगी लुसी र मार्क्सकी छोरी इलेअनोरसामुन्ने बकेको प्रमाण १८९८ मा लुसीले लेखेको पत्र इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर सोसियल हिस्ट्री, आमस्टरडममा सुरक्षित छ । मार्क्सको सम्पूर्ण व्यक्तित्व नबुझी उनीबाट प्रेरित एक महिला अधिकारकर्मीले यो तथ्य थाहा पाएपछि उनी विचलित हुनु अन्यथा होइन ।
पश्चिमा संसारमा सिग्मन्ड फ्रायडको प्रादुर्भाव भएसँगै व्यक्तित्वको अध्ययनमा यौन मनोविज्ञानले प्रश्रय पायो र त्यसयता इतिहासका महत्त्वपूर्ण मानिने मानिसको यौनजीवनका माध्यमबाट उनीहरूको व्यक्तित्वलाई हेर्ने कोसिस थालियो । फ्रायडको पद्धतिबाट मिथकीय, प्राचीन र आधुनिक पात्रहरू कोही बचेका छैनन्; फ्रायड स्वयं पनि यो अध्ययन पद्धतिको अपवाद बन्न सकेनन् । फ्रायडले आफ्नो उत्तराधिकारी (!) घोषणा गरेका मनोवेत्ता कार्ल गुस्ताभ युङले नै फ्रायडको निजी जीवन खोतल्दा उनीहरूबीच असमझदारी बढ्न पुगेको थियो । जोसेफ क्याम्पबेलद्वारा सम्पादित ‘द पोर्टेबल युङ’ (१९७१) का अनुसार, खासमा फ्रायडको आफ्नी सालीसँगको सम्बन्धलाई लिएर युङले चासो राखेका थिए । फ्रायडले श्रीमती र साली दुवैलाई सपनामा बरोबर देख्ने गरेकाले त्यो त्रिकोणीय सम्बन्धबारे युङ उचित निष्कर्षमा पुग्न चाहन्थे । फ्रायडले यसबारे युङलाई दिएको प्रत्युत्तर ‘म तिमीलाई यसबारे भन्न त सक्छु, तर मेरो प्राधिकारलाई विवादमा पार्न चाहन्नँ’ ले धेरै कुरा भन्छ । युङ भन्छन्, ‘फ्रायडले यो त्रिकोणीय सम्बन्धलाई राम्रोसँग केलाउन सकेका भए, उनी थप परिष्कृत हुने थिए ।’
विद्वान्हरूको तत्त्व–अन्वेषणमा मिथकीय देवताहरू त भाग्न पाउँदैनन् भने मार्क्स, गान्धी वा बीपी वा अन्यलाई उक्त फ्रेमबाट हेरिनु स्वाभाविक हो । पुरुष सत्ताको भारले थिचिने परम्परागत इतिहास लेखन शैलीलाई पुनर्लेखन गर्ने ‘न्यु हिस्टरिसिजिम’ ले इतिहास अध्ययनमा थप रोचकता प्रदान गरिरहेको छ । जगदीश घिमिरेले आफ्नो उपन्यास ‘सकस’ मा पृथ्वीनारायण शाह समलिंगी भएको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् ।
बीपीले आफ्नो जीवनका आखिरी वर्षहरूमा भोला चटर्जीसँगको अन्तर्वार्तामा आफू श्रीमतीप्रति इमानदार हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । यही कारण बीपीको व्यक्तिगत तवरमा श्रीमती सुशीलासँग कति मनमुटाव भयो या भएन, त्यसबारे केही कुरा बाहिर आएका छैनन् । न त बीपीले सम्बन्ध राखेका महिलाहरूका पक्षबाट ती कुरा बाहिर आएका छन् । तैपनि बीपीले भावी पुस्तालाई आफू सामान्य मानिसजस्तै थिएँ भन्नका लागि आफ्ना कमजोरी इमानदारीपूर्वक बताएर गएका छन् ।
कुनै पनि व्यक्तिको इमानदारी वा सच्चाइको मापन उसको समाज, परिवार र आफ्नाप्रति ऊ कति इमानदार हुन सक्यो र यी तीन तत्त्वबीच उसले कति सन्तुलन कायम गर्न सक्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । थोमस जेफर्सनले शेलीलाई श्रीमतीको दर्जा नदिए पनि अपेक्षाकृत अधिकार र आडभरोसा दिए । तेइस वर्ष पार गरेपछि उनीहरूका सन्तानले दासको हैसियतबाट कानुनी रूपमै छुट्कारा पाएका थिए । अमेरिकामा उक्त घटना भएको आधा शताब्दीपछि कार्ल मार्क्सले आफ्नी सेविकालाई त्यो तहको आत्मीयता प्रदान गर्न सकेनन् । मार्क्सका जनरल मानिने एंगेल्सले फ्रेडरिकको नक्कली बाबु बनेर मार्क्सको इज्जत धेरै वर्षसम्म छोपिदिए । तर, उनको परस्त्रीगमनबाट जन्मेको सन्तानको आलोकबाट हेर्दा ‘मी टु जेनेरेसन’ को कुनै नारीवादी चेत भएको लेखकले त्यो मानेमा मार्क्सलाई बलात्कारी भन्नु कुनै आश्चर्य होइन । तथ्यको बेवास्ता गर्दै मार्क्सले कुनै गल्ती गरेकै थिएनन् भनेर एकोहोरो प्रलाप गर्न उद्यत हुनुले बुद्धिमत्ता झल्काउँदैन । खासमा सरिताजीको आशय मार्क्सले गरेको गल्ती त इतिहासमा लुकेन भने, आफ्ना अगुवा र समकालीन सामजिक/राजनीतिक/सांस्कृतिक अभियन्तालाई संकेत गरेर, आन्दोलनका सहयात्रीसँग गर्ने निन्दनीय र घृणित व्यवहार बदल्न र सच्याउन चेतावनीपूर्वक आग्रह गर्नु रहेको देखिन्छ ।
कुनै पनि लेखक वा ऐतिहासिक पात्र लेखकीय/ऐतिहासिक सामर्थ्यले प्रसिद्धिको भागी हुन सक्छ । कुनै पनि आन्दोलनको आयतन त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावका आधारमा बढ्छ, न कि त्यस आन्दोलनका दर्म्यान भएका कमजोरीलाई छोपेर वा लेखकको व्यक्तित्वका कमजोरीलाई ढाकछोप गरेर । सबै खाले व्यक्तित्व अध्ययनको साझा निष्कर्ष ती व्यक्तिको सार्वजनिक–निजी वृत्तबीच कति तादात्म्य थियो भन्ने नै हो । गान्धीको भाषामा भन्नुपर्दा, उनीहरूको कथनी र करनीबीचको अन्तर कति थियो भन्ने नै हो । यो प्रतिमानबाट मार्क्स निःसन्देह कमसल साबित भएकै हुन् ।
खुला समाजमा स्वस्थ बौद्धिक विमर्श भइरहनुपर्छ । ती विमर्शको जग भने मनगढन्ते आरोप, बचाउभन्दा तथ्य र प्रमाणको सत्यापनमा आधारित भने हुनैपर्छ ।
प्रकाशित : असार १४, २०७८ ०८:०२
किशोर गणतन्त्र र निर्वाचित तानाशाही
२०४७–५८ मा आधुनिक लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरू जति निर्माण भएका थिए, ती सबै २०७४ यता धराशायी हुँदै गइरहेका छन् । गणतन्त्रको सर्वोत्तम उपलब्धि राष्ट्रपति संस्था नै सबैभन्दा विवादास्पद बनेको छ ।
जेष्ठ १४, २०७८ शंकर तिवारी
काठमाडौँ — २०६५ जेठ १५ मा, पहिलो जननिर्वाचित संविधानसभाले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षअगाडि संसद्वादी सात राजनीतिक दल र सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको नेकपा माओवादीको आह्वानमा भएको जनआन्दोलनको उभारसामु राजाले जनताबाट अपहरित अधिकार जनतालाई नै फर्काएका थिए ।
त्यो दिन, २०६३ को वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र दिवस नामकरण गरिएको थियो । दुई वर्षको अन्तरमा जन्मिए पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र झन्डै पर्यायवाची रूपमा हाम्रो मानसमा उपस्थित छन् ।
२०६३ जेठमा पुनःस्थापित संसद्ले जनआन्दोलनको म्यान्डेटमा टेक्दै नेपाली ‘म्याग्ना कार्टा’ घोषणापत्र जारी गरेर राजसंस्थाको सम्पूर्ण अधिकार छिन्यो । त्यस दिनदेखि राजसंस्था निलम्बित रह्यो । कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन नहुन्जेल राष्ट्राध्यक्षसमेत दोहोरो भूमिकामा रहे । यस्तो दुर्लभ अवसर पाकिस्तानका संस्थापक राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्नाले पनि पाएका थिए, गभर्नर जनरल र राष्ट्रपति दुवै पदमा आसीन भएर ।
पहिलो संविधानसभाले तराई–मधेसका सन्तान रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गर्‍यो । कुलीन परिवारमा र आलिसान दरबारमा जन्मेर जन्मजात राजपाटको अधिकारी हुने थितिलाई तोड्दै राष्ट्रप्रमुखको सामान्य परिवारको व्यक्ति पुग्नुले आममानिसमा असम्भव केही पनि छैन भन्ने भावना जागृत गरायो । शासनप्रणालीको मूलधारमा नभएको व्यक्ति पनि देशको सर्वोच्च पदमा पुग्दो रहेछ भन्ने नजिर बस्न पुग्यो । दोस्रो राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी निर्वाचित हुनुले फेरि अर्को कीर्तिमान बन्यो । स्मरण रहोस्, रामवरण यादवले राष्ट्रपति पदमा मधेसकै उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंहलाई परास्त गरेका थिए भने, विद्या भण्डारीले पहिलो पटक जनजाति पृष्ठभूमिका केबी गुरुङ र दोस्रो पटक महिला उम्मेदवार लक्ष्मी राईलाई पराजित गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रप्रमुख देशको अभिभावक हुन्छ । के राष्ट्रप्रमुखहरूले त्यो भूमिकालाई न्याय गर्न सकेका छन् त ? विचारणीय प्रश्न छ । सीमान्तकृत, उत्पीडित, बहिष्कृत, दलित समुदायको व्यक्ति सर्वोच्च शासकीय पदमा पुग्दैमा समुदायविशेषमा व्यापक सकारात्मक बदलाव आइहाल्छ भन्ने हुँदैन, तर त्यसले सबै जनामा ‘मोराल बुस्टर’ को काम भने अवश्य गर्छ । धेरै कुरा त राज्यले नै गर्नुपर्छ तर त्यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ । त्यसो हुन्थ्यो भने अमेरिकामा काला जातिका बाराक ओबामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पनि काला जातिका मानिसहरू गोरा जाति र राज्यबाट बर्बर दमनको सिकार हुनुपर्ने थिएन । अमेरिकाले गरेको गल्ती हामीले पनि दोहोर्‍याउनुपर्छ भनेको होइन, तर समाजको विज्ञान त्यस्तै हुन्छ ।
आधुनिक नेपालका तीनवटा मुख्य संक्रमणकाल २००७, २०४६ र २०६२/६३ हुन् । २००७ को संक्रमणकाल अन्तरिम संविधान हुँदै २०१५ मा गएर नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भई पहिलो संसद् निर्वाचित भएपछि सकिएको थियो ।
२०४७ को संक्रमणकाल एकदमै छोटो अवधिमा सकिएको थियो । २०१९ को संविधानका केही धारा निलम्बित गरेर एकै पटक २०४७ मा नयाँ संविधान जारी मात्र भएन, २०४८ मा संसद्को निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । झन्डै डेढ वर्षमा नयाँ संविधान बनाउनेदेखि नयाँ संसद्को निर्वाचनसम्मको श्रेय त्यति बेलाका दुई राजनीतिक सारथि गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जान्छ ।
तेस्रो संक्रमणकाल २००७ को भन्दा पनि लामो भयो । जनआन्दोलन सफल भएको दस वर्षमा मात्रै संविधान लेखिन सक्यो भने, संविधान लेखेको दुई वर्षपछि मात्रै नयाँ संसद्को निर्वाचन भयो । अन्तरिम संविधान–२०६३ हुँदै नयाँ संविधान–२०७२ र तीन तहका निर्वाचन सकिन २०७४ साल अर्थात् पूरै एक दर्जन वर्ष लाग्यो ।
कुनै पनि राजनीतिक संक्रमण लामो समय जानु भनेको त्यति बेलाका सारथिहरूमा संयोजन र समन्वयकौशल नहुनु हो । त्यसो त २०६२/६३ का मुख्य आर्किटेक्ट गिरिजाप्रसादको असामयिक निधनले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ, जसरी २००७ को संक्रमण लम्बिनुमा राजा त्रिभुवनको निधनले समेत भूमिका खेलेको थियो ।
नयाँ संविधान त बन्यो तर त्यसका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरू संवैधानिक प्रक्रियामा आफ्ना विरोधका बावजुद बिस्तारै सहभागी हुन थाले । उनीहरूले संसद्मा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नेदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्ममा भाग लिए । यसरी ‘दुनियाँको सबैभन्दा प्रगतिशील’ को उपमा पाएको २०७२ को संविधानले नयाँ गति लिने कोसिस गर्दै छ । तर २०७२ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भए पनि लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसप्रति आम जनतामा त्यस्तो उत्साह, उमंग सृजना हुन सकिरहेको छैन, जसका खास कारणहरू छन् ।
संविधान आफैंमा एउटा अमूर्त दस्तावेज हो, जसले मूर्त रूप त्यति बेला लिन्छ जब त्यसका अक्षरहरू आमजनतामा भरोसालायक बन्छन् । कुनै पनि राजनीतिक उपलब्धिले जनताको जीविकोपार्जनलाई भरथेग गर्न सकेन भने त्यो अधुरो–अपुरो हुन्छ ।
हुन त उदार लोकतन्त्रको फ्रेममा अति दक्षिणपन्थी, अति वामपन्थी र अधिकारवादी सबै खाले शक्ति अटाउनु एउटा ‘एन्ड अफ हिस्ट्री’ को क्षण जस्तो अवश्य देखिन्छ । अरू त अरू, ‘एन्ड अफ हिस्ट्री’ को थेसिस अपुरो भएको तथ्य फुकियामा स्वयंले अर्को पुस्तक ‘आइडेन्टिटी’ मा स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यही भएर संविधानको दीर्घायुका लागि त्यस्तो भ्रम कसैलाई छ भने त्यसबाट यथाशीघ्र बाहिर आउनैपर्छ । समाज गतिशील छ, गतिशीलताले समाजमा नयाँ–नयाँ अन्तद्र्वन्द्व पैदा गर्छ । जतिसुकै जटिल अन्तद्र्वन्द्वको हल पनि संविधानबाटै निकाल्न नसकिने होइन । सृजनात्मक सोच र सकारात्मक इच्छाशक्ति भयो भने त्यो सम्भव हुन्छ ।
यो संविधान आफैंमा नेपालले एक्काइसौं शताब्दीमा झेल्नुपर्ने नयाँ समस्या समाधानको लागि रामवाण होइन, तर समस्या समाधानका लागि सहायकचाहिँ अवश्य हुन्छ भन्ने सबैको अनुमान हो । दलित समुदायका अगुवा अम्बेडकरको नेतृत्वमा लेखिएको भारतको संविधानलाई अहिले आएर उनकै अनुयायीले ‘द रिपब्लिक अफ कास्ट’ करार गरेका छन् । हाम्रो गणतान्त्रिक संविधान पनि जातीय संविधानभन्दा माथि रहन नसकेको अनुभव दलित, अल्पसंख्यक, उत्पीडित समुदायले गर्दै आएका छन् । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको ‘एन्थम सङ’ भन्न मिल्ने ‘बिसे नगर्चीको बयान’ नवराज विकको मृत्युको करुण क्रन्दन बनेर भेरीमा बगेजस्तो देखिन्छ ।
सबै देशमा अनेक खाले राजनीतिक समस्या छन् । जहाँ जातको समस्या छैन, त्यहाँ आप्रवासनको समस्या छ । तर तिनीहरूले ती समस्यालाई चलिरहेको पद्धतिमा समाहित गरेर समाधान निकाल्ने कोसिस गर्छन् । चालु पद्धतिभित्रै तीव्र असन्तुष्टि र प्रतिरोधी आन्दोलनलाई समेट्ने ठाउँ राज्यले छोडिरहेको हुन्छ र सामाजिक आन्दोलनलाई बर्बर दमन नगरीकन त्यस्ता माग सम्बोधन गर्दै जान्छ । र, उही सफल राज्यमा दरिन पुग्छ । यही कुरा डेरोन एसमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनको ‘द न्यारो कोरिडोर’ पुस्तकमा गरिएको छ । २००७ यता जारी भएका संविधानहरूले कुनै पनि आन्दोलनलाई आफूमै समाहित गरेर त्यसलाई चालु व्यवस्थाभित्र सम्बोधन गर्ने सीप र क्षमताको विकास नगरेको देखिन्छ । हाम्रो संविधानवादको कमजोर कडी यही हो ।
२०१५ को संविधानलाई त त्यो संविधान बक्सिस दिने पक्षले नै एकपक्षीय रूपमा असफल घोषणा गरेको थियो । त्यो अति दक्षिणपन्थी शक्ति थियो । २०४७ को संविधान असफल हुनुमा अति वामपन्थी समूहको विशेष भूमिका थियो र अति वामपन्थी समूहको आड–बलमा अति दक्षिणपन्थी शक्तिले त्यसलाई नष्ट पार्न कोसिस गरेको थियो । २०७२ को संविधानमा संविधाननिर्मातामध्येको शक्ति आफैंले अति दक्षिणपन्थी रूप धारण गरेर आघात पुर्‍याउँदै छ । केपी ओलीले ‘निर्वाचित तानाशाह’ को रूप धारण गरिसकेका छन् । र, ओलीलाई निर्वाचित तानाशाह बनाउने बाटामा कुनै विघ्नबाधा नआओस् भनेर राष्ट्रप्रमुख नै खुलेर लागेकी छन् ।
गणतन्त्रकालको प्रथम निर्वाचित संसद््लाई पाँच महिनाको अन्तरमा दुई पटक विघटन गर्ने कार्यलाई सदर गरेर राष्ट्रपति देशको संरक्षक बन्नबाट चुक्दै गएकी छन् । पुसमा गरिएको विघटनलाई फागुनमा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक करार गरेर पुनःस्थापित गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा बरु राजा वीरेन्द्रले बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य गरेका थिए, २०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा सर्वोच्चको राय मागी त्यसलाई सदर नगरेर ।
२०४७–५८ मा जति आधुनिक लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरू निर्माण भएका थिए, ती सबै २०७४ यता धराशायी हुँदै गइरहेका छन् । गणतन्त्रको सर्वोत्तम उपलब्धि राष्ट्रपति संस्था सबैभन्दा विवादास्पद बनेको छ ।
संघीयता आफैंमा खर्चिलो व्यवस्था भएकाले देशको ढुकुटीमा थप नगद सञ्चिति बढाउनुपर्नेमा त्यसमा गम्भीर धक्का पुगेको छ । कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा हेलचेक्र्याइँले गर्दा राज्यप्रति नागरिकहरूको भरोसा कम हुँदै गएको छ । रोजगार बजारमा बर्सेनि आउने युवाहरू देशभित्रभन्दा बाहिर खपत भएका छन् । देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा भारी गिरावट आएको छ ।
इटालीका विख्यात राजनीतिशास्त्री गिओबानी सर्टोरी भन्छन्, ‘समुद्रको आफ्नो प्रकृति हुन्छ । तर हाम्रो जहाज डुब्यो भने त्यो पाइलटको खराबी हो । हामीले जहाजको कम्पास पनि नहेर्ने अनि समुद्रलाई दोष दिने गर्न मिल्दैन ।’ कतिपयले यो पद्धतिलाई दोष दिइरहेका छन् तर गणतन्त्रको माझी बनेर हामीलाई हाम्रो रामराज्यमा पुर्‍याउन चाहने नेतृत्वमा देखिएको पात्रहीनता र ऐतिहासिक चेतको अभावले गर्दा अहिलेको समस्या देखा परेको हो । समस्या व्यक्तिमा छ, पद्धति होइन । दार्शनिक एडमन्ड बुर्के भन्छन्, ‘झार यस्तो चीज हो जुनसुकै माटोमा पनि उम्रिहाल्छ ।’ त्यही भएर हामीले त्यो माटोमा लगाइएको बिरुवाको गोडमेल गरिराख्नुपर्छ । निर्वाचित तानाशाही एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक माटोमा उब्जिएको त्यस्तै झार हो ।
राजा महेन्द्र वा राजा ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक लक्ष्मणरेखा नाघेकाले राजतन्त्र इतिहासको विषय बन्न पुग्यो । गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति अहिले त्यही बाटोमा निःसंकोच सवार भएकाले जनमानसमा राष्ट्रपति संस्थाप्रति अपनत्व भाव कमजोर देखिएको छ । कुनै पनि संस्थाको गरिमा त्यसमा आसीन पात्रको चरित्र र आचरणले निर्धारण गर्छ । त्यो कसीमा वर्तमान राष्ट्रपति खरो नदेखिनु दुर्भाग्य हो । लक्ष्यप्राप्तिका लागि साधनको पवित्रता अत्यन्त जरुरी हुन्छ । सामान्य परिवारमा जन्मेर राष्ट्रको असामान्य पदमा पुग्नु गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सामान्य कुरा हो तर त्यो पदलाई थप उच्च गरिमा र मर्यादा दिन सक्नु असामान्य रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निराश बनाएको भए पनि यो पद्धतिले हामीलाई धोका कदापि दिन सक्दैन ।
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७८ १६:५४